Automobile nhọrọ nhọrọ mkpa mkpa anya-News Center-NINGBO SUNSOUL UTgbọ ala ngwa mma CO., LTD
Nhọrọ nhọrọ ụgbọ ala nke chọrọ nlebara anya
Oge: 2020-12-08 Hits: 15
1. gosiri gosiri
Ga-ebu ụzọ hụ na taya anaghị ebu oke mgbe ị na-ahọrọ taya, maka otu nkọwa nke taya ahụ nwere ike ịnwe ikike dị iche iche, ga-a paya ntị na mgbe ị na-ahọrọ, otu bụ otu nkọwa nke taya ahụ nwere usoro nhazi dị iche iche, yabụ ibu ahụ ikike dị iche dịkwa iche, chọrọ ịhọrọ nke ọma, 2 ọ bụ otu nkọwa nke taya na otu ojiji na ejima na ibu ọrụ dị iche iche dịkwa iche iche, ejima na itinye, n'ihi na ụzọ camber na axle ibu mgbe ekwe deformation, n'ime na n'èzí na-ebu ibu dị iche, steeti abụọ nke ibu ikike bụ nchikota nke otu taya gburugburu 1.72 ugboro, 2 ugboro abụghị.
productionbọchị mmepụta ire dịkwa oke mkpa, na taya dị n'akụkụ hub nwere ike ịhụ usoro nke ọnụọgụ anọ, nke mbụ bụ izu mmepụta, nke abụọ bụ afọ nke mmepụta, ọ bụrụ na ị gaa ịzụta taya, ọ bụrụ na taya ahụ etinyela ogologo oge, mgbe ahụ taya ahụ nwere ike ịka nká, na-emetụta arụmọrụ ahụ.
3.Zere ịnyagharị taya
Na ịhọrọ ma zụta iji zere dịka o kwere mee, taya na ịzụta ga-a paya ntị, ịchọpụta usoro taya arụzigharị dị mfe, ihe kachasịkarị bụ ịlele agba na ọkụ nke taya ahụ, agbazigharị taya na luster dịtụ inyoghi inyoghi, metụ oge ga-ahapụ mkpịsị aka, otú kụrụ ndị dị otú ahụ taya anaghị ịzụta blindly.
N'otu oge ahụ, ihe ịrịba ama nke taya ụgbọ ala nwere ụfọdụ ntụ, na-egosi ụdị taya na arụmọrụ, ndị a na-amatakwa ihe ọma nke taya arụgharịrị, ihe ịrịba ama nke taya arụzigharị ga-arịgo mgbe emezigharị, na akara nke taya ọhụrụ bụ na taya, njirimara usoro bụ iji mbọ aka scratching na ndị a ihe ịrịba ama, izugbe ntaghari ohuru taya nke ihe ịrịba ama ndị a na-adịghị nnọọ uko, nwere ike ijide apụ ga-refurbished taya.
4.Lezienụ anya n'ụdị taya
Mgbe ị na-ahọrọ taya, kpachara anya ka ị ghara ịgwakọta ụdị taya dị iche iche, dị ka ndị kwesịrị ekwesị maka ụgbọala ndị na-apụ n'okporo ụzọ, tinyere nke ụgbọ ala nkịtị, ma ọ bụ taya ụgbọ ala na-eduzi egwuregwu na taya nkịtị.
5.Taịa na-echekwa arụmọrụ
Taya ga-enwerịrị arụmọrụ dị mma, ya na nkwusioru na-agbachi ma na-eme mkpọtụ nke ụgbọ ahụ, ọ bụrụ na arụmọrụ taya adịghị mma, ga-emetụta nkasi obi nke ụgbọ ahụ, kamakwa ọ na-emetụta ndụ nke akụkụ ndị ọzọ nke ụgbọ ahụ.
Taya ga-emepụta mkpọtụ na usoro nke ịkwọ ụgbọala. Taya nwere usoro na usoro dị iche iche ga-ewepụta ọkwa dị iche iche na ọsọ ọsọ dị iche iche, na mgbe ụfọdụ mkpọtụ ahụ ga-eru ogo iwe.Ihe dị n'elu bụ otu esi ahọta taya, usoro nhọrọ ịhọrọ taya iji webata ọdịnaya ahụ, enwere m olileanya na m ga-enyere gị aka.
Previous: Ihe dị mkpa nke taya ụgbọ ala pụtara ìhè, yabụ otu esi edozi taya ụgbọ ala
Ọzọ: Inye ekele jupụta obi na ekele